Case bandhigid - Hospital Shijiazhuang Yiling
Case number ka mid ah:
Mr Xiao, 67 sano jir ah, kansarka beerka hoose, AFP1000u / ml, caloosha CT: kansarka beerka Rafaa, foomka focal, de cajiinkuna wuu jirey xaq cava liita vena iyo xididka portal, iyo duulaankii kaabsal beerka la effusion subcapsular, cirrhosis, portal ballaariyo arooriyaha , cholecystitis, dheecaan agagaarka kaadi ah, mid ka mid beeryarada siyaada. Bixiso embolization la tacaalid ah + daawo Chinese iyo daaweynta kale oo isku dhafan. Saameyn ku cad.
Case number laba:
Fan Yusuo, lab, 57, kansarka sanbabada midig, cudurada of carcinoma cell squamous, burada encroaches halbowlaha pulmonary, iyo lumay fursad hawlgalka, radiotherapy waxaa sidoo kale ahaan uu u.
Bixi isaga daaweynta isku dhafan, qayb ka mid ah daaweynta waxaa ka mid ah: daawo + la tacaalid ah + hyperthermia.
Haddaba CR qiimeynta waxtarka (dembidhaafka buuxa), ilaa hadda ay u noolaadaan in ka badan 3 sano, sida caadiga ah ku nool yihiin.
Wang Moumou, lab, 54 sano jir, Shijiazhuang. Wuxuu ayaa la dhigay isbitaal bishii July 2010, sababtoo ah kabuubyo ee jirka iyo tabar muddo ka badan hal sano.
In July 2009, bukaanka ka cawday kabuubyo ah iyada suulasha ka dib markii is qarxiyaan hawada-qaboojiyaha iyada oo cabasho, iyo ugu dhakhsaha badan waxaa jiray kabuubyo labada farood, taas oo aan la qiimeeyo. September xagga koonfureed oo safar ganacsi, waxaa jiray qandho, qandho antibiotic daaweynta dib, gacanta-foot calaamadaha kabuubyo si tartiib tartiib ah horumarinta proximal, oo ay la socdaan tabar, socodka la aqbali karo, isbitaalka gobolka innaba hubiso dhaladii iyo araxda afka ilmo-galeenka marka laga reebo, isbitaalka nabadda hubi dhabarta The lumbar tusay "lumbar 2-3 neurofibroma intraspinal", iyo myoelectricity tusay "aan caadi ahayn dareemayaasha distal in muruqa distal." Bishii November, intuu ku socday inuu Hospital Tiantan si ay u qabtaan dareemayaasha resection buro galkeeda.
miisaanka Postoperative khasaaro ahayd 20 jins, kabuubyo in jirka si tartiib ah kor u kacay, xasilooni socda, kaadida caadiga ah, cudurka miyir, iyo biyaha u dhexeeya qufaca, aragti binocular la nystagmus yar siman, February 2010 isbitaalka gobolka, waxaa jiray, hubi myoelectricity muujinaysaa "dhabanada , Axon distal motor, lesions myelin, dareemayaasha dareenka gebi ahaanba burburay ", laba geesood ah kartiyo caadi farxda, aan caadi ahayn jiridda maskaxda-maqalka farxda iman kara, audiometry midab saafi muujinaysaa dareemayaasha binaural dabac Galmada, bahal" neuropathy chronic "ee biopsy dareemayaasha sural bidix, cudurka sida" Green-Ballie syndrome ", sii nalalka gamma dose waaweyn, yareeyo hormoonada iyo quudin dareemayaasha, loo hagaajiyo daaweynta wareegga, la baabi'iyo calaamadaha xaakada, yareeyo kabuubyo in addimada, ka miisaan lumis soo kabsado, iyo dibadda ku lugeyso. Ka dib markii dheecaan, xaaladda ayaa ahaa mid xasilloon, calaamadaha kabuubyo at darafyadiisa oo jirka ah weli iska cad, daciifnimada ahaa jilbaha hoose, socodka ahaa deganayn, iyo in ay adagtahay in u istaagaan indhaha la xidhay ama ku dul socda habeenkii, sidaas darteed waxaan isbitaalka si loogu daweeyo noo yimid.
Ka dib 4 todobaad 'daaweynta ee isbitaalka: Astaamaha kabuubyo dhamaadka gacmaha iyo cagaha waxaa loo soo hagaagtay, oo flexion ee cagtu waa fasalka 4aad, oo ah socodka waa mid deggan. Raac-up: ilaa hadda ku xoogeystay lahayn, nolol caadi ah iyo shaqada. Sababta oo ah meel xaddidan, waxaan aan muujin karin in ka badan oo daawayn our. Haddii aad rabto in aad ogaato daaweyn gaar ah, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa email.
cudur kalyaha ah
waxaad ka dalban kartaa daaweynta daawada Chinese inay dibadda?
Saraaxad hadlayay, daawo Chinese fudud loo arkaa in dal kasta, in alaale inta uu jiro dukaan daawo Chinese. Si kastaba ha ahaatee, daaweynta daawada Chinese nidaamsan aan la heli karin dibadda. Sida ay la samayn doonaa iyada oo ku xidhan xaalad cudur gaar ah. Taasina waa sababta aan ku waydiin doonaan warbixino caafimaad inta lagu guda jiro isgaadhsiinta, si aan u kala dhig dhigi karaa xaaladdaada in faahfaahin ka dibna dhigi qorshaha daaweynta.
Waxa ay tahay hawsha aanu daawo Chinese haysaan?
Inta lagu guda jiro daawaynta oo dhan, daawo Chinese ciyaari saamaynta ku daweynta soo socda:
1. Fidinta xididdada dhiigga jirka oo dhan
2. Kor u socodka dhiigga galay kelyaha iyo hagaajinta wareegga dhiigga
3. dhiig la quudiyo iyo Stasis ka saareen
4. Bixinta nafaqo ku filan iyo oksajiin si uu dhammaantood kelyaha
5. Kordhinta awoodda is-daweyn ah unugyada kelyaha ay waxyeello ka
6. Xoojinta Qamaan, mid ka mid ah tamarta muhiim ah, in jidhka
7. Horumarinta heerka sifeynta kelyaha
In daaweynta 2 todobaad, bukaanka sonkorowga Afrika ayaa helay Integrated daaweeyo waxyaabaha. Dhammaan shaqaalaha faraxsan yihiin in ay arkaan iyada la sii fiicnaanayaa.
TCM technology daaweynta, TCM decoction, daawo shan-element qubeyska, daawo galbeedka lagama maarmaan ah ....
Waxaa laga yaabaa in aad ka arki kartaa Duugista meel kasta, si kastaba ha ahaatee, waxa aan leeyahay waa Tuina, oo ka shaqeeya on xubnaha gudaha, nidaamyada gudaha, ma massage kaliya on maqaarka ama muruqa; waxaa laga yaabaa in aad ka arki kartaa Irbadaha meel kasta, si kastaba ha ahaatee, acupoint kasta, xagal kasta, si qoto dheer kasta oo cirbadaha shaqeeyaan; waxaa laga yaabaa in aad ka arki kartaa qubeyska daaweysan oo meel kasta, si kastaba ha ahaatee, waxaan isticmaali aragti shan-element si uu u hago, oo ku salaysan xaaladda jirka gaar ah, si caawinaad in bukaanka qudhiisa.
Saamaynta hadli karin.